Apple TV + dia te hanana studio fandraisam-peony any Los Angeles | Avy amin'ny mac aho
Apple TV + dia te hanana studio fandraisam-peony any Los Angeles
Araka ny filazan'ny Wall Street Journal, Apple dia te-hanofa campus famokarana any Los Angeles, azo inoana fa ho an'ny Apple TV +. Ity ivon-pamokarana audiovisual (46.000 m2) ity dia mety mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa metatra toradroa, satria ilaina izany toerana ampy hamokarana fandaharana amin'ny fahitalavitra maro sy sarimihetsika.
Ny antony lehibe nahatonga an'i Apple hamorona studio fandraisam-peo nataony dia entanin'ny tsy fahampiana ao an-tanànan'ny studio, ary matetika dia amandrika am-bolana maro mialoha izy ireo studio izay mila famokarana atiny tsy tapaka, izay mahatonga ny orinasa hanana ny habaka ho azy ireo mivantana na hiantoka amin'ny fampanofana izay mitahiry ny toerana mandritra ny taona maro.
Mike Mosallam dia nanatevin-daharana an'i Apple tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity Mpanatanteraky ny famokarana fananan-tany lehibe any Los Angeles, miaraka amin'ny tanjona hanara-maso ny paikadin'ny orinasa amin'ny sehatry ny famokarana. Talohan'ny fandrindrana ny famokarana sy ny fanofana studio an'ny Netflix izy taloha.
Toa manantena i Apple manitatra ny fanatrehanao any Hollywood miaraka amin'ny fanokafana ny campus. Manofa trano ho an'ny tsirairay ny orinasa amin'izao fotoana izao handefasana horonantsary ho an'ny Apple TV + any Los Angeles sy any amin'ny faritra hafa manerantany, saingy ny campus manokana dia afaka mandrindra ny fizotry ny famokarana ary manamafy ny fanoloran-tenan'i Apple hifaninana amin'ireo serivisy fitaterana horonantsary hafa.
Hatramin'ny nanombohany ny volana novambra 2019, Apple TV + dia nandefa fandaharana sy horonantsary fanta-daza, anisan'izany ireo hira "Ted Lasso" sy "The Morning Show", saingy mbola ampahany kely ihany izany. raha oharina amin'ireo mpifaninana efa tafiditra sahala amin'i Netflix na Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple TV + dia te hanana studio fandraisam-peony any Los Angeles
Miverina i Apple mba hampiditra ny kisary antsy amin'ny Final Cut hanoloana hety
Apple Music hampiantrano hetsika mivantana amin'ny hetsika rakikira Kayne West vaovao rahampitso alakamisy